Turkish Cargo Na-amalite ụgbọ elu Site Izmir | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Aegean35 IzmirTurkish Cargo Na-ebido Ife Na lightszmir
18 / 05 / 2020 35 Izmir, Mpaghara Aegean, General, Ụgbọelu, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Turkey
ibu toloki na-amalite ụgbọ elu ya si izmir
Turkish Cargo (THY), ụdị ụgbọ mmiri nke ụgbọ elu Turkish Turkish, nke rụgoro ọnụ ọgụgụ kachasị elu n'etiti ndị na-ebu ụgbọ elu 25 kacha elu, na-eme atụmatụ njem gaa İzmir kwa ụbọchị na May 28.
Turkish Cargo osote onye isi njikwa Turhan Özen, osote onye isi Cargo ahịa Ahmet Kaya, Ankara, Istanbul, Izmir, Antalya, ndị isi Adana anakpo Cargo zara ajụjụ ndị a gbasara ụgbọ njem ụgbọ mmiri nke mkpụrụ osisi na -eresị akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi. enyocha.
Onye isi oche nke Association nke Aegean Fresh Mkpụrụ na akwukwo nri nke na-ahụ maka nzukọ ụgbọ elu Hayrettin, na-abawanye ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu iji gboo mkpa niile nke ndị na-ebupụ ụgbọ mmiri Cargo n'oge coronavirus kwuru na ọ nọgidere na-abụ onye na-edozi Turkey maka ndị na-emepụta na mbupụ.
“Ezie na mmachi na njem n'ihi coronavirus belatara okporo ụzọ nke ndị njem ụgbọ elu, ọ wetara njupụta n'akụkụ akụkụ ụgbọ elu. Na mgbakwunye na ụgbọ elu, ụgbọ elu na-ebu n'ọdụ ụgbọ mmiri ndị njem nke THY. Anyị nwere ụgbọ mmiri Turkish, nke nwere ụgbọ ibu ikuku isii kachasị ukwuu n'ụwa, anyị na-ebuga ọnụ ahịa gbakwunye ngwaahịa nwere ndụ shelf dị ala n'ọtụtụ mba. Ọnụahịa na ụgwọ otu, ga-enwekwu ezi uche ka ọnụọgụ nke ụgbọ elu emepere. N’afọ 2019, ikuku na-ebugharị nde 6 nde 213 puku mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri dị mma maka mgbanwe nke mkpụrụ 19 761. Mbupu nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọhụrụ nke ikuku na-eme n'afọ gara aga ji pasent 2018 karịa nke bara uru ma e jiri ya tụnyere afọ 9. ”
Hong Kong buru ụzọ jiri $ 4 nde 309 puku
O kwuru na mbupụ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri kacha mma site na ikuku ka emere Hong Kong na nde 4 nde 309 puku dollar.
Mbubata na China were 1 nde 337 puku dollar. N'aka nke ọzọ, France nọ n'ọnọdụ nke ise nwere nde dollar 1 na mbupụ ụgbọ mmiri anyị. Site na mgbasawanye nke netwọ ụgbọ elu ụgbọelu Turkish Turkish, Turkish Cargo na-abawanye mmetụta ya na ahịa mba ụwa, yabụ netwọ ahịa ahịa anyị na-agbasawanye. Mbupụ nke cherị, bụ nke weere ọnọdụ mbụ na mbupụ mkpụrụ osisi na akwukwo nri dị ọhụrụ n'ime afọ gara aga site na nde dollar 10, ji pasent 2018 mụbaa na ọnụ ọgụgụ na pasent 23 na ọnụ ahịa ma e jiri ya tụnyere 53. Ngwa ahịa nke abụọ anyị na-ebubata bụ anụ olu nwere nde dollar 2 349. N’ozi mbupụ, a nwetara ego ruru nde dọla 2019, 7 na 2 na mmụba nke pasent 569. ”
N'ikwu na mbupụ mkpụrụ osisi cherị na Taiwan na South Korea emepeela China n'oge na-adịbeghị anya, ọ sịrị, "Tupu oria ojoo, anyị nwere ọrụ Ur-Ge abụọ maka China, South Korea, Malaysia, Singapore na tere East na South East Asia. South Korea, nke batara na Ndị na-ebupụ Mkpụrụ na Inine, na-eme ụgbọ elu abụọ kwa izu. ” kwuru.
Oge izizi na 28 Mee
Onye Njikwa Ego Obodo Turkish Faik Deniz kwupụtara na ịga njem na Izmir na-eme atụmatụ kwa ụbọchị na 28 Mee.
"Ọ bụrụ na ahụ dị obosara, anyị ga-enwe ike iziga Istanbul ihe dị ka tọn 30. Nke a ga-ewepụtụ mkpa maka ike. Dịka ọ dị na ngwaahịa dị nro, anyị ga-ebute ụzọ maka mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọhụrụ maka ikike. Ọ bụrụ na oke nke azụmaahịa na-abawanye na mbupụ cherry na China, anyị ga-etinye akwụkwọ nchekwa ma ọ bụ ụgbọ elu ndị ọzọ. Afọ a agaghị ekwe omume, mana echere m na anyị ga-enwe ike ịrụ ọrụ ndị ọrụ ọrụ nchekwa dabere na mmụba nke ọchịchọ n'afọ ndị na-abịanụ. Anyị na-arụ ọrụ anyị niile na-aga n'ihu n'otu ọdụ ụgbọ elu. A ga-ebelata nsogbu ndị ahụ. Na Izmir, anyị wepụrụ palle anyị na ngwongwo anyị site na itinye usoro nhichapu azụ. Ọ bụ ọgwụ mgbochi ga-ebelata nsonaazụ coronavirus ma dowe ya ụbọchị 30. Nke Ministri Ahụike kwadoro, ọ bụ oge izizi na Izmir. Nke a na - egbochi mgbochi. Nje virus ahụ adịghị agafe. ”
A ga-ebu ngwongwo n’elu ụgbọ elu n’ebighi agbaji ụdọ
Faik Deniz, onye mara ọkwa na ebe a na-edebe ebe nchekwa oyi na mpaghara nke obosara 731 square na mpaghara 3 878 cubic mezuru na February, kwuru:
Site nha ya, ọ pụtara na mpaghara Izmir ga-egbo mkpa nke afọ 20-25 nke nchekwa. Mgbe anyị tinyere ụlọ nkwakọba ihe anyị enweghị ike ime ka ọ dị ọhụrụ, anyị nwere ihe dị puku anọ cubic mita nke ebe nchekwa oyi. Mgbe anyị na-ebufe ngwaahịa ndị a site na X-ray, a na-ebuga ha n'ụlọ nkwakọba ozugbo ma agbajikwa agbụ. Anyị zitekwara ihe ndị anyị chọrọ gbasara akụrụngwa pụrụ iche anyị ga-ebu n'okpuru ụgbọelu. A ga-eburu ngwongwo ndị ahụ na ụgbọ elu na-agbanyeghị agbụ oyi. Houselọ nkwakọba ihe dị n'agbata ogo 4 na 0. Anyị nwere atụmatụ maka dulls na agba nke abụọ. Anyị ga-eme ọkwa na-adịghị mma. Anyị chere na oge oyi n’oge ọrụ mbụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị sele mwepu na ikuku oyi, ọ ga-asọ gị oyi ma ịkwesịrị iji ya mee ụlọ ọzọ. ”
Njem ọzọ agbagoro na South Korea nọ na atụmatụ
Onye enyemaka nke onye isi ụgbọelu Turkey bụ Turhan Özen kwuru, "Ọ bụrụ na a na-achọ ịrịwanye njem na South Korea, anyị na-akwado mgbakwunye nke ruo otu ọnwa ma ọ dịkarịa ala n'oge oge cherry ahụ ga-abụ ihe kacha arụ ọrụ. Anyị na-aghọrọ mkpụrụ nke ọrụ ndị otu Aegean Exporters 'emebere kemgbe afọ 3-4. Site na n’ihu ịba ụba a anyị jigoro na mbido mbupụ nke mkpụrụ osisi cherị na China na June afọ gara aga, anyị ga-abawanye mkpụrụ mbupụ mkpụrụ osisi ọhụrụ na ụgbọ mmiri. Plangbọ elu ndị njem anyị na-amalite na June. Anyị na-enye njikọ na mba niile nke ụwa. Ndụ nchekwa nke ngwaahịa dị ka mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọhụrụ pere mpe ma ọnụ ahịa dị elu. Ya mere, anyị na-eme ihe pụrụ iche na mpaghara mkpụrụ osisi ọhụrụ na ikike na ọnụahịa. " o kwuru okwu.
Atụmatụ iwu THY dịla njikere
Özen kwuru na n’afọ a, a na-ahazi ọnụ ahịa ụgbọ elu, na-enye ndị nnọchi anya ọnụ ahịa mkpọsa pụrụ iche, na-agbakwunye na e meela atụmatụ maka ụgbọ elu ndị njem kemgbe June.
“N'ihi Covid-19, ọtụtụ mba na-eji nwayọọ nwayọọ na-anabata ndị njem nọ na mba ofesi. A na-eme Turkey site n'echiche ahụ na otu na-aga n'ihu nke omume na-agbadata maka mba abụọ a ka ha na-arụ ọrụ maka imezi mmekọrịta ọnụ. Ngalaba anyị na-ebufe na-aga narị abụọ na iri abụọ na narị abụọ na iri abụọ na anọ agafe ụwa. Ọ ga-abụ na ọkwa ndị a ọzọ, dịka Septemba-Ọktọba. Ọ ga - ebido na mba 320-290 na mbido. A ga-ekpebi mkpebi ahụ ruo mgbe permittedlọ Ọrụ nyere ikike. N'oge mbupụ a, a gaghị enye ihe dị ukwuu nke ngwaahịa anyị kwa ụbọchị, kwa ụbọchị. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na a na-ebugharị ụgbọ elu na njem ụgbọ elu na ebu ibu n'okpuru ụgbọ elu ndị njem. Ọ niile dabere na njem ndị njem. Thegbọ elu 50 nke ụgbọ elu na-enye ọrụ ebu. Site na ntinye nke ụgbọ elu 60 na-ebugharị na-amalite na June, ọnụ ego ị ga-akwụ ụgwọ ga-abịa atụmatụ a.
"Anyị na-agba mbọ ibuga ngwaahịa anyị n'usoro"
N'imesi ike na mmụba nke ọnụahịa ụfọdụ ebe aga-emetụta ọnọdụ ndị ọzọ, Cengiz Balık, osote onye isi oche nke Board nke Aegean Fresh Mkpụrụ na Akwukwo nri, gara n'ihu dịka ndị a:
“Ekwesiri ime atụmatụ banyere oge ụbọchị njem ụgbọ mmiri ndị dị ka Indonesia, Taiwan, Cambodia, Kuala Lumpur. Isi ihe ndị ọzọ dị mkpa bụ ntinye nke ụgbọ ala oyi maka njem nke ngwaahịa, igbu oge ụgbọ elu, waits na ọdụ ụgbọ elu oyi. N'okpuru ụgbọ elu, n'okpuru nku na-echere awa 2-3 ruo mgbe eburu. Ka ihu igwe na-ekpo ọkụ, ọ na -emepụta nkwarụ akwa maka ngwaahịa anyị. Anyị ga-agba mbọ iji mkpuchi kpuchie ngwaahịa anyị. Anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ iji hụ na ngwaahịa anyị erutere ndị ahịa anyị na ahụike. Ọ dị mkpa imeghe Ọdụ ụgbọ elu Adnan Menderes. Na mpaghara ebe anyị na-ebuga ya, anyị ga-ebuga ngwaahịa anyị n'ọdụ ụgbọ elu Ataturk Istanbul ochie. Ọ dị ezigbo mkpa na mgbe anyị na-ebuga ibu anyị n'ọdụ ụgbọ elu Adnan Menderes, ọ na-aga ebe ahụ omenala. Ọ bụrụ na ahịrị ezinụlọ ebido, a ga-edozi ọnọdụ a. ”
Onye Njikwa Ahịa Ahịa Turkish Cargo Mustafa Asım Subaşı kwuru na arụ ọrụ n'okpuru ala bụ njikọ kachasị mkpa na yinye ahụ, na blanket na-ekpo ọkụ na-ebelata mmebi na ngwaahịa ndị a na-ebuga na mba ndị na-ekpo ọkụ.
Ụgbọ mmiri Turkey Na-akwadebe maka Ụlọ Ọhụrụ
Ngwọta na UTİKAD-Turkish Cargo Workshop nọ na Gündem
Ndokwa maka mgborogwu na ogwe osisi na İzmir
Turkish Locomotive Engine Industries Inc. InnoTrans na-aga 2012 Fair
31 Uludag Ropeway Line malitere nyocha na March
Mgbidi Na-agbanwe Ọhụrụ Toros Express 16 malitere n'August
Adaray amalite njem ụgbọ elu ya
17 ịmalite Adaray kwụrụ ụgbọ elu na June
Pamukkale Express 6 malitere njem ya mgbe ọtụtụ afọ gasịrị
Burulaş malitekwara ọrụ ụgbọ ala na mpaghara
Azụ ụgbọala na-adịghị na UK
Usoro Konak amalite njem
Ụgbọ mmiri na-aga na Lake Van
Tragbọ mbufe mbufụt eburula njem gaa Europe na Marmaray
Cabin nke na - egbu Coronavirus na nkeji iri atọ
Minista Turhan: 'Ankara Express Start Expedition As of Today'
Mmiri mmiri ozuzo nke Lufthansa na UTİKAD na ndị òtù ya
Ụgbọala Cargo Austria na-aga n'ihu na mmekọrịta dị na Voestalpine
Turkish Wagon Mmeputa Inc.